watchOS 2.0 Wuxuu Qufulka Dhaqdhaqaaq u keenayaa Apple Watch | Wararka IPhone
watchOS 2.0 Waxay keeneysaa Qufulka Furashada Apple Watch
Waxay ahayd cillad weyn qaybtii ugu horreysay ee nidaamka hawlgalka Apple Watch. Muhiimad u leh ahmiyaddeeda, isla markaana muhiim u ah macno-darradiisa. Apple wuxuu ilaaway inuu ku daro Activation Lock badeecadiisa ugu caansan sanadka, mid ka mid ah astaamaha ku yimid macruufka 7 laba sano ka hor oo ahaa mid ka mid ah horumarkii ugu weynaa ee xagga amniga sanadihii la soo dhaafay, illaa heer ay si weyn hoos ugu dhacday iPhone xatooyo. Laakiin waxay umuuqataa in Apple uu dhaqso uga falceliyay, maxaa yeelay inkasta oo uusan ku xusin dhacdadiisa maanta, Apple Watch waxay heleysaa quful firfircoon oo ku jira nooca cusub ee nidaamkeeda hawlgalka, watchOS 2.0.
Sida iPhone ama iPad, Apple Watch waxay u baahan doontaa koontadaada iCloud si aad u shaqeyso. Sidan oo kale, haddii qof uu qabto oo uu doonayo inuu tirtiro, ma awoodi doonaan inay sameeyaan iyada oo aan la helin xogtaada marin-u-helka ee iCloud, xogtaaduna sidoo kale way badbaadi doontaa. Waa xaqiiqo muhiim ah haddii aan xisaabta ku dareyno in Wallet-ka Apple Watch uu keydin doono xogta ku saabsan kaararkaaga deynta ee loo isticmaali doono Apple Pay, marka ma doonaysid inay xogtaasi ku dhacdo gacanta dad aan lagu kalsoonaan karin.
Nooca cusub ee watchOS ayaa hadda la heli karaa si looga soo dejiyo server-yada Apple, in kasta oo kaliya loogu talagalay kuwa horumariya. Markii aan ogaanno astaamaha cusub ayaan kaaga warrami doonnaa iyaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » watchOS 2.0 Waxay keeneysaa Qufulka Furashada Apple Watch
Marka hore eeg macruufka 9 ee iPhone iyo iPad
Marka macruufka 9 soo baxo: taariikhda la sii daayo ee macruufka cusub